Iindaba -Ndimele ndenze ntoni xa umpu wokuzitywina uziva ungenakuzitywina?
Nokuba umpu wombane kwilori yezibaso unokuzitywina, kuxhomekeka ikakhulu ekubeni igumbi lokudibanisa lingenza vacuum ngokwaneleyo. Ke ngoko, xa umpu wokugcwalisa ungenako ukuzitywina, kuya kufuneka usonjululwe ikakhulu ngokwale mibono ilandelayo:
1. Jonga ukuba itywina elihlangeneyo phakathi komgqomo nomzimba womipu lithembekile na. Jonga ukuba i-O-ring yonakele kwilungu. Ukuba yonakele, inokutshintshwa emva kokufakwa kwenye.
2. Ukuba kukho umba welinye ilizwe kumphezulu we-taper we-barrel cone valve, susa umgqomo kwaye ususe ukungcola uphinde ufake kwakhona.
3. Jonga igumbi lokucoca ukuvuza kwamanzi. Xa isiciko se-vacuum, uvalo lwe-vacuum luphukile okanye isikisi sokutshixa asikho endaweni, isicoci asinakwenziwa kwaye sizitywinele.
4. Amanqanaba amancinci okuhamba ayizitywini: kwimeko yokuhamba okuncinci, inqanaba lokuhamba kolwelo liphantsi, isiphumo sokutsala ulwelo asibuthathaka, igumbi lokucoca alinako ukuvelisa ngokwaneleyo, kunye namandla entwasahlobo Intwasahlobo ayinakoyiswa ukwenza umpu wombane uzitywine.
5 Ukuba uyawuqonda umgaqo osebenzayo kunye nokusetyenziswa kompu wezibaso, unganxibelelana nathi, siza kukunika impendulo eyanelisayo.
Ixesha Post: Sep-25-2019